Dian-tongotra ekolojika, fantaro ny fiantraikany sy ny fomba fanisana azy. Fanavaozana maintso
Dian-tongotra ekolojika, fantaro ny fiantraikany sy ny fomba fanisana azy
Daniel Palomino | | tontolo iainana, Tontolo_iainana
Nisy a famantarana ny faharetana iraisam-pirenena ary efa naheno an'izany tokoa ianao. Ity famantarana ity no dian-tongotra ekolojika.
Miaraka amin'ireo fanamby vaovao mipoitra dia mila mampitombo sy mameno ny fampahalalana rehetra azo omena ny harin-karena faobe (vokatra an-trano lehibe) azontsika, iFamantarana ampiasaina manerantany amin'ny toe-karena.Ilaina izany mba hahafahana mamolavola politika voalanjalanja izay afaka maneho ny fanolorantenany ny Tontolo iainana sy ny fiadanam-bahoaka.
Ity mari-pahaizana biofizika momba ny faharetana ity, ary efa miresaka momba ny jeografia fotsiny aho, dia afaka mampiditra ny karazana fiatraikan'ny fiarahamonina olombelona amin'ny tontolo iainany. Raha dinihina dia lojika, ny loharano ilaina rehetra ary koa ny fako vokarin'ny vondrom-piarahamonina voalaza.
1 Inona ny dian-tongotra ekolojika?
2 Ny fandalinana ny dian-tongotra ekolojika
2.1 Vokatry ny tontolo iainana tena izy
4 Kajy ny dian-javaboahary
4.1 Manisa ny fanjifana ireo sokajy samihafa amin'ny singa ara-batana
4.2 Ovay ireo fanjifana ireo ho lasa sehatra biolojika mpamokatra sahaza amin'ny alàlan'ny index indexivity
4.3 Fanjifana angovo
4.4 Kajy sisa
5 Kajy ny dian-javaboahary manokana
6 Ataovy tsy miangatra ny dian-tongotra ekolojika
Inona ny dian-tongotra ekolojika?
Ny dian-tongotra ekolojika dia voafaritra ho
ny faritra feno famokarana ekolojika ilaina hamokarana ireo loharanon-karena lanin'ny olom-pirenena tsotra eo amin'ny fiaraha-monina misy olona iray, ary koa ny ilaina mba hisitrihana ny fako vokariny, na aiza na aiza toerana misy an'ireo faritra ireo
Ny fandalinana ny dian-tongotra ekolojika
Mba hametrahana azy ho toy ny mari-pamantarana, mila fantarintsika aloha ny fomba fanaovana kajy ny dian-tongotra voalaza, ho an'ireo lafiny toy ny:
Mila onjam-pitaovana sy angovo ilaina foana ny famokarana izay tsara na serivisy (na inona na inona haitao ampiasaina). Ireo fitaovana sy angovo avy amin'ny rafitra ekolojika na angovo mivantana mikoriana avy amin'ny Masoandro amin'ny fisehoana samihafa.
Ilaina ihany koa izy ireo, rafitra ekolojika hisitrika ny fako vokarina mandritra ny fizotry ny famokarana sy ny fampiasana ireo vokatra farany.
Ny velaran'ny mihena ny tontolo iainana mamokatra satria ihazakazaka ny toerana miaraka amin'ny trano, fitaovana, fotodrafitrasa ...
Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mahita ny fomba famantarana io mampiditra fiantraikany marobe, na dia misy aza ny hafa tsy maintsy raisina, toa ireo izay manambany ny tena fiantraikan'ny tontolo iainana.
Vokatry ny tontolo iainana tena izy
Ny fiantraikany sasany dia tsy isaina, indrindra ny toetra maha izy azy, toy ny fandoto ny tany, ny rano ary ny atmosfera (afa-tsy ny CO2), fikaohon-tany, fahaverezan'ny harena voajanahary na fahasimbana avy amin'ny tontolo iainana.
Heverina fa maharitra ny fampiharana amin'ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny ala, izany hoe tsy mihena ny famokarana ny tany rehefa mandeha ny fotoana.
Ny fiatraikany mifandraika amin'ny fampiasana rano dia tsy raisina, ankoatry ny fibodoana mivantana ny tany amin'ny alàlan'ny fitahirizana sy fotodrafitrasa hydraulic ary ny angovo mifandraika amin'ny fitantanana ny tsingerin'ny rano.
Amin'ny maha-fenitra ankapobeny azy, ezahina tsy hanisa ireo lafiny izay isalasalana momba ny kalitaon'ny kajy.
Amin'io lafiny io dia misy ihany koa ny fironana hisafidy ny safidy malina indrindra raha ny amin'ny fahazoana valiny.
Ny singa iray mifameno amin'ny dian-tongotra ara-tontolo iainana dia ny zavakanto eo amin'ny faritany iray. Ilay faritra mamokatra biolojika misy izany toy ny voly, ala, kijana, ranomasina mamokatra ...
Miresaka ny biocapacity ho singa mifameno satria ny tsy fitovizan'ireo tondro ireo manome antsika vokatr'izany ny fatiantoka ara-tontolo iainana. Izany hoe, ny fatiantoka ekolojika dia mitovy amin'ny fitakiana loharano (dian-tongotra ekolojika) kely loharanom-pahalalana azo ampiasaina (biocapacity).
Raha ny fahitana manerantany dia tombanana ho 1,8 ha ny zavakanto eto an-tany ho an'ny mponina tsirairay, na inona no itovizany, raha tsy maintsy mizara ny tany mahavokatra eto an-tany amin'ny faritra mitovy isika, amin'ny tsirairay amin'ireo mponina mihoatra ny enina miliara eto ambonin'ny planeta, dia 1,8 hektara no mifanaraka amin'ny filany rehetra ao anatin'ny herintaona.
Manome antsika ny hevitry ny fandaniana sy fandaniam-bola lehibe ataonay izany, ary raha mbola mitohy toy izao isika dia tsy ho afaka hanome ny olona rehetra ny tany.
Raha tahirin-kevitra mahaliana dia omeo hevitra izany Etazonia dia manana dian-tongotra 9.6Midika izany fa raha miaina toa an'i Etazonia izao tontolo izao dia mila planeta 9 sy sasany mahery ny Tany.
Ny dian-tongotra ekolojika an'ny 5.4 i Espana
Kajy ny dian-javaboahary
Miorina amin'ny fanombatombanana ny faritra mamokatra ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny fanjifana mifandraika amin'ny sakafo, ho an'ny vokatra ala, fanjifana angovo ary fibodoana mivantana ny tany.
Mba hahafantarana ireo sehatra ireo dia dingana roa no entina:
Manisa ny fanjifana ireo sokajy samihafa amin'ny singa ara-batana
Raha toa ka tsy misy angona fanjifana mivantana dia tombanana amin'ny fomba fitenenana manaraka izao ny fanjifana hita ho an'ny vokatra tsirairay:
Fanjifana miharihary = Famokarana - Export + Import
Ovay ireo fanjifana ireo ho lasa sehatra biolojika mpamokatra sahaza amin'ny alàlan'ny index indexivity
Izy io dia mitovy amin'ny fikajiana ny faritra ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny salanisa per capita fihinana ny vokatra iray nomena. Ampiasaina ny sanda famokarana.
Dian-tongotra ekolojika = fanjifana / famokarana
Ny sanda famokarana izay hampiasainay dia azo resahina amin'ny sehatra manerantany, na azo isaina manokana ho an'ny faritany iray, ka amin'izany dia dinihina ny teknolojia ampiharina sy ny fahombiazan'ny tany.
Ho an'ny fikajiana mahazatra, ny fampiasana ny anton-javatra famokarana manerantany (toy ny tranga hitanao etsy ambony) satria azo atao amin'iny fomba io ny manao ny fampitahana ny soatoavina azo avy amin'ny dian-tongotra ara-tontolo iainana amin'ny ambaratonga eo an-toerana ary mandray anjara amin'ny normalization tanteraka ny famantarana.
Mba hahazoana ilay dian-tongotra ara-tontolo iainana mikasika ny fanjifana angovo dia samy hafa ny fanatanterahana azy arakaraka ny angovo angovo tokony hodinihina.
Ho an'ny lasantsy fosily. Loharanon-kery lehibe ampiasaina, na dia mihena aza noho ny angovo azo havaozina, ilay dian-tongotra ekolojika mandrefy ny faritry ny fitrohana ny CO2.
Izany dia azo avy amin'ny fanjifana angovo tanteraka, na mivantana na mifandraika amin'ny famokarana sy ny fizarana ny entana sy ny serivisy lany, zarain'ny fikajiana CO2 ny faritry ny ala.
Raha vantany vao voaisa ireo fanjifana ary ampiharina ny indeksam-pamokarana, dia afaka manana ny faritra mamokatra samihafa heverina (voly, kijana, ala, ranomasina na faritra artifisialy).
Ny sokajy tsirairay dia manana vokatra biolojika samihafa (ohatra: ny vokatra iray hektara dia mahavokatra kokoa noho ny iray amin'ny ranomasina), ary alohan'ny hanampiana azy ireo dia ilaina ny miroso amin'ilay atao hoe normalisation.
Mba hanaovana izany, ny faritra tsirairay mavesatra izany amin'ny alàlan'ny antony fitoviana izay maneho ny fifandraisana misy eo amin'ny famokarana biolojika ny sokajy tsirairay amin'ny habakabaka momba ny vokatra eo ho eo amin'ny tontolon'ny planeta.
Amin'io lafiny io, ny zava-misy fa ny fitovian'ny ala dia 1,37 dia midika fa ny famokarana ala iray hektara dia, eo ho eo, 37% ny famokarana betsaka kokoa noho ny salan'isa famokarana ny velarana manontolo.
Raha vantany vao nampiharina tamin'ny sokajy tsirairay avy ny haben'ny fitoviana, dia manana isika izao ny dian-tongotra ara-tontolo iainana ambara amin'ny antsoina hoe hektara manerantany (gha).
Ary miaraka amin'izany rehetra izany raha afaka manohy manampy azy rehetra isika ary amin'izany dia mahazo ny dian-tongotra ekolojika.
Kajy ny dian-javaboahary manokana
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe ohatrinona ny "natiora" takiana amin'ny fomba fiainanao? Ny questionnaire "Ny dian-tongotra ekolojika" dia manisa ny velaran'ny tany sy ny faritry ny ranomasina ilaina tazomy ny lamina fanjifana anao ary alao ny fako isan-taona.
Amin'ny maha lamina mahazatra azy, matetika ireto fitaovana ireto no miresaka ireto manaraka ireto:
hery: Fampiasana angovo ao an-trano. Fikajiana manerantany amin'ny alàlan'ny karazana angovo isan-taona, ary koa ny vola lany amin'izany.
rano: Tombana ny isan-jaton'ny fanjifana amin'ny salanisa sy ny voka-dratsin'ny fampitomboana ankapobeny ny fomba fandanianao rano.
Fitaterana: Firy ny fihodinana feno azonao atao amin'ny planeta amin'ny fampidirana ireo famindran-toerana rehetra ao anatin'ny herintaona.
Fako sy fitaovana: Ny habetsahan'ny fako vokarin'ny ao an-trano isan'olona sy ny isan-jaton'ny akora azo averina.
Rehefa avy mamaly Fanontaniana tsotra 27 Ao amin'ny MyFootPrint, azonao atao ny mampitaha ny dian-tongotra ekolojika amin'ny an'ny olon-kafa ary mahita ny fomba ahafahantsika mampihena ny fiantraikanay amin'ny Tany.
Tsidiho ny pejy myfootprint ary valio ireo fanontaniana.
Raha niaina ny olona ary nanana fomba fiaina mitovy ilaintsika 1,18 Tany, Mandalo kely fotsiny aho na dia tao anatin'ny taona vitsivitsy aza dia nihena izany hatramin'ny nahalalako voalohany ny momba ny dian-tongotra ekolojika dia nataoko izany ary tadidiko fa 1,40 aho, noho izany dia eo amin'ny lala-mahitsy isika.
Ataovy tsy miangatra ny dian-tongotra ekolojika
Tapak-tontolo iainana ekolojika
Para ny firafitry ny dian-tany ara-tontolo iainana any Espana no zava-dehibe indrindra dia ny dian-tongotra angovo, manana anjara 68%, ambonin'ireo 50% napetraka manerantany.
Noho io antony io dia zava-dehibe ny manamarika fa ny singa lehibe indrindra amin'ity dian-tongotra ity (ilay dian-tongotra angovo) dia ny famokarana entan'ny mpanjifa miaraka amin'ny 47,5%, ity Nikajiana tamin'ny fanjifana angovo mivantana sy ny angovo voarakitra ao anaty entana nafarana.
Aorianan'ny laharana faharoa dia manana ny sehatry ny fitaterana sy ny fivezivezena izahay miaraka amin'ny 23,4% ary amin'ny trano fahatelo misy 11,2%.
Miorina amin'ireo angona ireo, tombanana ho Espana dia manana fatiantoka ekolojika 4 ha isan'olona, izany hoe 175 tapitrisa hektara manerana ny firenena.
Raha fintinina, mila isan-taona ny isan'ny mponina espaniola maherin'ny 2,5 heny ny faritaniny hahafahany miaina ny fari-piainan'ny mponina sy ny mponina. Noho izany, manana fatiantoka ekolojika isika izay mihoatra ny salanisan'ny UE ary maneho fa i Espana dia manana habaka ihany mba hanomezana sakafo sy ala ala ho an'ny mponina ankehitriny.
Fa ny zava-dehibe eto dia izany raha vantany vao manana ny valin'ny dian-javaboahary isika dia tokony hampihena izany.
Ny fampihenana ny dian-tongotra manerantany na amin'ny ambaratonga manokana dia tsy inona fa ny fampiharana fahazarana maharitra maharitra toy ny fampiasana rano madio, ny fampiasana fitateram-bahoaka na fomba hafa izay tsy mandoto, fanodinana, fampiasana jiro jiro ambany, ny insulation ny varavarankely sy ny varavarana, ny fampiasana fitaovana mahomby ary ny lava sns.
Ireto fomba amam-panao tsotra ireto (izay nandany vola kely tamin'ny voalohany nefa lasa ampahany amin'ny fiainantsika ihany) mety hisy fiatraikany amin'ny fitsitsiana angovo ao an-trano 9% eo ho eo isan-tokantrano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » tontolo iainana » Dian-tongotra ekolojika, fantaro ny fiantraikany sy ny fomba fanisana azy
Ny Nosy Balearic dia hampitombo ny fahafaha-manavao azy 25% amin'ny valan-javaboary vaovao 7
Ny fahalotoan'ny rivotra dia miteraka fahafatesan'ny olona 16.000 isan-taona